ဦး အောင်ကိုလတ် ဇနီး အဆိုတော် J me ၏ မိခင် ဒေါ်တင်မိုးခိုင် ( ခ ) Marie Conway ကွယ်လွန် - Myanmarload
ဦး အောင်ကိုလတ် ဇနီး အဆိုတော် J me ၏ မိခင် ဒေါ်တင်မိုးခိုင် ( ခ ) Marie Conway ကွယ်လွန်
လွန်ခဲ့သော ၁ နှစ် က 11:27 June 19, 2017
ကောင်းကင်ပြာကို ဘယ်သူက ဆေးရောင်ခြယ်ဆိုတဲ့ စာသားနဲ့ သီချင်းကို လူတိုင်းနီးပါးသိကြမှာပါ။
သီချင်းရဲ့ အဆိုတော် ဒေါ်တင်မိုးခိုင်ကတော့ တနင်္ဂနွေညမှာ ကွယ်လွန်သွားပါပြီလို့သိရတဲ့အတွက် ပရိသတ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ ၊ အင်းစိန်မြို့နယ် ၊ ဗိုလ်တေဇလမ်း ၊ ခြံအမှတ် ( ၇၄၆ ) နေ ( P.Conway + ဒေါ်ခင်အံ့ ) ၏သမီးအကြီး ၊ ဦးအောင်ကိုလတ်၏ဇနီး ၊ Betty Conway ( ခ ) သူဇာမင်း ၊ ဒေါ်ပေါက်စ ၊ ( တင်တင်အုန်း ) ၊ ( ဦးဂျိုးဇက် ) ၊ ဒေါ်ညိုညိုစန်း ၊ ဒေါ်စန်းစန်းဌေး ၊ ( ဦးအောင်သူရ ( ခ ) Baby Sean ) တို့၏အစ်မ ၊ Michelle Anne Latt ၊ ခန့်ဇင်ကို ( ခ ) J Me တို့၏ မိခင်သည် ၁၈ . ၆ . ၂၀၁၇ ( တနင်္ဂနွေနေ့ ) ည ၇:၁၅ မိနစ်တွင် ကွယ်လွန် သွားကြောင်း သိရသည်
၂၀ . ၆ . ၂၀၁၇ ( အင်္ဂါနေ့ ) နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီတွင် ပြည်လမ်းမနှင့်မပိုလမ်းထောင့်ရှိ Fatima Church မြေနီကုန်း ၌ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ပြီး နံနက် ၁၁:၀၀ နာရီတိတိတွင် ရေဝေးသုဿန်သို့ ပို့ဆောင်ဂူသွင်းမည် ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Page generated in 0.0428 seconds with5database query and5memcached query.